एउटा जिल्लाको मनोनयन पत्रमा हस्ताक्षर गर्न कति समय लाग्ला?
एउटा जिल्लाको मनोनयन पत्रमा हस्ताक्षर गर्न कति समय लाग्ला?
आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि उम्मेदवार बन्ने व्यक्तिले आफ्नो मनोनयन पत्र भर्न कति मिनेट लाग्ला?
बढीमा १० देखि १५ मिनेट!
अनि त्यही मनोनयन पत्रमा हस्ताक्षर गर्न नि?
तर, सोच्नुस् त, देशभरि नै उम्मेदवारी दिने प्रमुख राजनीतिक दलको केन्द्रीय नेतृत्वलाई आफ्ना सबै उम्मेदवारको मनोनयन पत्रमा हस्ताक्षर गर्नुपरे कति मिनेट लाग्ला?
यसको सहज उत्तर नआउन सक्छ।
एक मिनेटमा दुईवटा मनोनयन पत्रमा हस्ताक्षर गरे पनि देशभरिका सबै स्थानीय तहका सबै उम्मेदवारको मनोनयन पत्रमा हस्ताक्षर गर्दा साढे १२ दिन लाग्न सक्छ। त्यो पनि प्रतिमिनेट दुईवटाका दरले चौबीसै घन्टा हस्ताक्षर गरे।
निर्वाचन आयोगको पछिल्लो निर्णयअनुसार सबै राजनीतिक दलले स्थानीय तहमा उम्मेदवारी दिन केन्द्रीय तहबाटै तोकिएको नेता वा प्रतिनिधिकै हस्ताक्षर अनिवार्य हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। यसका लागि सबै दलले आफ्नो तर्फबाट उम्मेदवारी पत्रमा हस्ताक्षर गर्ने प्रतिनिधिको आधिकारिक हस्ताक्षरकर्ताको नाम र हस्ताक्षरको नमूना आयोगमा बुझाइसकेका छन्।
एउटा उम्मेदवारका लागि तीन प्रतिमा हस्ताक्षर गर्नुपर्छ– एउटा निर्वाचन कार्यालयमा उम्मेदवारी दर्ता गर्न, एक प्रति पार्टीको जिल्ला कार्यालयका लागि र अर्को उम्मेदवारकै लागि। यही दरमा हस्ताक्षर गर्दा एउटै दलले झन्डै १ लाख १० हजारभन्दा बढी मनोनयन पत्रमा हस्ताक्षर गर्नुपर्छ। यसका लागि त झन् कति समय लाग्ला!
यही समस्या बुझेर नै नेपाली कांग्रेसले ७५ जिल्लाका लागि सम्भव भएसम्म एक जिल्लामा एक केन्द्रीय सदस्यलाई हस्ताक्षरको जिम्मा दिएको छ।
मनोनयन पत्रमा पार्टीको केन्द्रीय नेतृत्वको हस्ताक्षर चाहिने निर्वाचन आयोगको अनिवार्य व्यवस्थालाई सुरुमा पार्टीहरूले सामान्य रूपमा लिएका थिए। जब उक्त व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने बेला आयो, तब मात्र यसको व्यवहारिक कठिनाइ नेताहरूले बुझे।
नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य मानबहादुर विश्वकर्मालाई अहिले यही व्यवहारिक कठिनाइ परेको छ।
पार्टीले विश्वकर्मालाई गोरखा जिल्लाका सबै स्थानीय तहका उम्मेदवारको मनोनयन पत्रमा हस्ताक्षर गर्ने जिम्मेवारी दिएको थियो। गृहजिल्ला अर्घाखाँचीमा रहेका विश्वकर्मा आफू स्वयं गोरखा जान सक्ने परिस्थितिमा थिएनन्। त्यसैले, उनी आइतबार साँझ राजधानी आइपुगे। र, सोमबार केन्द्रीय कार्यालयबाट गोरखामा पार्टीले पठाउने उम्मेदवारको मनोनयन पत्रमा हस्ताक्षर गर्न थाले।
‘गोरखाका लागि १ हजार ८ सय मनोनयन पत्र लिएर म घर गएँ, तर त्यसमा हस्ताक्षर गरेर मात्र नपुग्ने रहेछ,’ विश्वकर्माले सेतोपाटीसँग भने, ‘त्यसपछि मैले श्रीमती, छोरी र भतिजीको समेत सहारा लिनुपर्यो।’
उनका अनुसार मनोनयन पत्रमा केन्द्रीय प्रतिनिधिको दस्तखतका अतिरिक्त नामसमेत लेख्नुपर्ने रहेछ। विश्वकर्माले प्रत्येक मनोनयन पत्रमा आफ्नो नाम लेख्ने काम परिवारका सदस्यलाई लगाएर हस्ताक्षर आफूले गरेको बताए। यति गर्न पनि सोमबार झन्डै आठ घन्टा लागेको उनले जानकारी दिए।
‘झन्डै आठ घन्टा धम्मरधुस लागेर हस्ताक्षर गर्दा मेरो हात, जीउ पूरै दुख्यो,’ उनले भने, ‘राति सुत्नै गाह्रो भयो।’
विश्वकर्माका अनुसार पार्टीका तर्फबाट झन्डै ५ सय उम्मेदवार भए पनि प्रत्येक उम्मेदवारको तीनप्रति मनोनयन पत्र र कुल मनोनयन पत्रको १० प्रतिशत जगेडामा हस्ताक्षर गर्न बढी समय लागेको हो।
प्रतिमिनेट तीनवटा भन्दा बढीका दरले हस्ताक्षर गरेका विश्वकर्माले भने, ‘मनोनयन पत्रमा नाम लेख्न परिवारको सहयोग नलिएर त्यो पनि आफैंले गरेको भए त एक दिनमा कुनै हालतमा सकिने थिएन।’
प्रकाशित मिति: बुधबार, बैशाख ६, २०७४ १३:३२:५१